‘७ नं. प्रदेशमा नयाँ शक्ति पार्टी सम्मानजनक मतसहित विजयी हुन्छ’ | नयाँ शक्ति नेपाल
‘७ नं. प्रदेशमा नयाँ शक्ति पार्टी सम्मानजनक मतसहित विजयी हुन्छ’
- २१ जेठ २०७४
उत्प्रेरक, ७ नं. प्रदेश, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
७ नं. प्रदेशमा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको चुनावी अभियान कसरी अघि बढिरहेको छ ?
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा ७ नं. प्रदेशमा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल चुनावी अभियानमा तीव्रताका साथ लागिरहेको छ । यो प्रदेशमा क्रियाशील नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका विभिन्न तह र तप्कामा कार्यरत अभियन्ताहरु चुनाव प्रचारप्रसारमा क्रियाशील छन् । ७ नं. प्रदेशकै कञ्चनपुर र कैलालीका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा हाम्रो पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईकै उपस्थितिमा केही समय अगाडि चुनावी कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, पुनर्वास नगरपालिका तथा कैलालीको गौरीगंगा, घोडाघोडी, भजनी, लम्कीचुहा नगरपालिका, हसुलिया गाउँपालिका लगायतका ठाउँहरुमा चुनावी कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने क्रममा पार्टी संयोजककै विशेष उपस्थिति रहेको थियो । चुनाव प्रचारप्रसार अभियान यतिबेला डडेल्धुरा, डोटी, दार्चुला र वैतडीमा तीव्रताका साथ भइरहेको छ । म आफैं यस क्षेत्रमा क्रियाशील छु ।
चुनाव प्रचारप्रसार अभियानमा संलग्न हुँदै गर्दा के कस्तो अनुभूति भएको छ ?
हामी चुनाव प्रचार–प्रसार अभियानमा क्रियाशील भइरहँदा साँच्चै नै नयाँ शक्तिप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गइरहेको महसुस गर्दैछौं । पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रदेश नं.३, ४ र ६ मा प्राप्त जनमतबाट पनि हामीले शिक्षा प्राप्त गरेका छौं । ती प्रदेशमा हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो पूरा हुन सकेन । यद्यपि चुनाव चिन्हलगायत कैयौं कारणले जनता झुक्किएका थिए । कतिपय जनता हामीलाई मतदान गर्न इच्छुक हुँदाहुँदै पनि विविध कारणले मतदान गर्न असमर्थ भएका थिए । तर ७ नं. प्रदेशमा त्यो अवस्था आउने छैन । ७ नं. प्रदेशका हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामा हाम्रो पार्टीले सम्मानजनक मत प्राप्त गर्नेछ । कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकामा हामी विजयी हुने अवस्था छ ।
जनताले नयाँ शक्ति पार्टीको उपस्थितिलाई कुन रुपमा लिएका छन् त ?
जनता यतिबेला आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेण्डा बोकेको नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गर्दैछन् । नयाँ शक्ति पार्टीलाई जनताले वैकल्पिक शक्तिकै रुपमा लिएका छन् । हाम्रो पार्टीप्रति जनताको आकर्षणले यही कुराको पुष्टि गर्दछ । ७१ वर्षअघि स्थापना भएको कांग्रेस र ६८ वर्षअघि स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टीले विभिन्न चरणमा राजनीतिक आन्दोलन गरेर आफूलाई स्थापित गराएका हुन् । त्यसको तुलनामा हाम्रो पार्टी स्थापना भएको जम्माजम्मी एक वर्ष पुग्दैछ । यद्यपि हाम्रो पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा विशेष योगदान रहेको छ । उहाँ आफैं परिवर्तनकारी आन्दोलनको विरासतबाट आउनु भएको छ । समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी त्यागी र क्षमतावान नेतृत्व हुनुहुन्छ । जनताले उहाँको त्याग र क्षमतालाई राम्रोसँग बुझेका र हेरेका छन् । हामीसँग दूरदर्शी नेतृत्व भएकै कारण नयाँ शक्ति पार्टीको भविष्य उज्वल छ भनेर ७ नं. प्रदेशका जनताले बुझेका छन् ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार छनौट कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी यतिबेला उम्मेदवार छनौट प्रक्रियाबारे पनि छलफल गरिरहेका छौं । हामीले मुलुक र जनताको पक्षमा बढी भन्दा बढी काम गर्न सक्ने, आर्थिक समृद्धि र विकासको योजनालाई जोड दिनसक्ने भिजनसहितको नेतृत्वलाई चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै छौं । उम्मेद्वार छनौट प्रक्रियामा हामी पार्टीभित्र बृहत छलफल गरेर एकमतले उम्मेदवार छनौट गर्छौं ।